Zvidzidzo zveChirungu Shona Kudzidza ChiGerman, Kudzidza ChiGerman
Chikoro cheMitauro yeUK
musha » Site Promotions » Chikoro cheMitauro yeUK
Nzvimbo yakarurama mumutauro wemhando: United Kingdom
"Mutauro mumwe, mumwe munhu" "anodaro madzitateguru edu. Ndizvo chaizvoizvo here? Saka sei munhu akava wechipiri apo anodzidza mutauro wokumwe, uye nei? Upenyu hwevanhu huri kutarisa mune imwe nzira, hutsva hutsva hwezuva nezuva hune zvikonzero zvakasiyana zvekufambira mberi kose. Somuenzaniso, pane musiyano mukuru pakati pehuwandu hwevanhu vaifamba kune imwe nyika muhupenyu hwekutengeserana kusvikira gore rapfuura uye nhamba yevanhu vaifamba kune dzimwe nyika kuti vatengese mu100. Makore 2019 apfuura, kwete vanhu, asi kuenda kune imwe nyika, munyika yavo yega kune rimwe guta, kunyange kubva kune rimwe guta kuenda kune rimwe guta raizopedza mazuva avo mumugwagwa revan. Madzitateguru edu, avo vakati "mutauro munhu uyea munguva yakaoma kudaro, vaiziva kuti kudzidza mutauro wokune imwe nyika kwaidiwa maererano nemamiriro ezuva iroro. Nguva yedu ipfuma, nguva yakakwirira mune zve teknolojia, sayenzi netsika, uye nhamba yevanhu vanofamba kune dzimwe nyika kune zvekutengeserana nezvimwe zvikonzero zvakanyanya. Kuti ugare kune dzimwe nyika kana kuti upedze nguva, unofanira kuziva mutauro wekuenda. Kana paine mez hapana nzira, hapana mutauro wekutaura, zvinenge zvakaoma kuti munhu arambe ari kune dzimwe nyika. Zvechokwadi, kudzidza mutauro wenyika imwe neimwe kunotora nguva pachako, asi kudzidza mutauro wenyika yose seChirungu kunoderedza mutoro. Chik chikoro chechikoro Zvichida nyaya yacho inofanira kuparadzirwa uye kuongororwa.
Nei zvikoro zvemutauro weUK?
Chii chinonyanya kukosha pakusarudza nyika yezvedzidzo? Zvechokwadi, mararamiro enyika, mararamiro ayo anopa uye mararamiro ayo ane zvikwereti Ichokwadi, munhu wose anoda kurarama munzvimbo yakafuma pasi pematatu aya. Pano panewo chidzidzo chekudzidzisa chebasa iri; dzidzo yenyika ndiyo chinhu chinonyanya kujekesa hutsika yenyika neEngland ine dzidzo yepamhando yepamusoro yakasiya nyika zhinji munyika mushure mekudzidzisa. Mukutsanangura zvikonzero, zvichida izvi zveEngland zvinofanira kuva panzvimbo yekutanga. Chik chikoro chechikoroinoramba ichiongororwa nedzimwe nhengo dzinobatsira uye imwe nguva inopiwa kuti kubviswa kwekushaiwa kunoonekwa. Kana kukanganisa kusina kubviswa mukati meyi nguva, zviito zvakakomba zvinoshandiswa. Nokudaro, zvingava zvakakodzera kuita "kunaka" kuonga kwemazana ose emitauro yemitauro iri kudzidzisa pano. Maitiro emitemo enyika ino anokosha zvakare. Nhoroondo yaro, simba rayo panyika uye nezvimwe zvinhu zvakawanda zvine chokuita nezviuru zvemakore zvinoratidza kuti nyika ine ruzivo rwakawanda. Tsika, iyo yavakapararira kune nyika dzakange dziri pasi pehuchangamire hwenguva refu, inoramba iripo kunyange munyika dziri pasi pehuchangamire hwemazuva ano. Somugumisiro, zvinonyanya kuzivikanwa kuti dzidzo yemutauro ingadai iri sarudzo yakanaka munyika ine yakadaro yakaitika uye yakakosha zvikuru munyika.
KUFUNGA IZVI: Shona Translation
Tanga kupinda mubasa rako!
Kana wakasarudza kudzidza mutauro mushure mezvikonzero zvataurwa pamusoro apa uye nheyo yakawanda yeEngland, tichaita kuti England ive yako sarudzo yekutanga. Kunyange zvazvo iri nyika inopa dzidzo yemutauro munzvimbo dzakawanda dzenyika; Tinofunga kuti hapana nyika yakapfuma, yakarongeka uye yakazara sekodzero dze UK. Chik chikoro chechikoro Iwe unogona kuwana ruzivo rwakakosha pamusoro pezvikoro zvemutauro kubva pawebsite yedu kuitira kuti uwedzere kubudirira muupenyu hwako hwehupenyu uye kusvika panzvimbo yaunoda, iwe unogona kuwana ruzivo rwakakwana pamusoro pezvikoro nekunyora nekutaura nesangano redu iro rinopa basa rekudzidzisa mazano kune dzimwe nyika. Zvakanakisisa kwauri, zvakanakisisa zvekudzidzisa kwako ndeye UK. Kuti uwane mamwe mashoko https://alternatifecs.com/ingiltere-dil-okullari/ peji.
YDS 2008 German Exam Mibvunzo neMhinduro
Re: 2019 Visa Tarisiro